Tag: Nyochaa ahịa | Martech Zone
Tag: Nyochaa ahia
Oge eruola maka ịre ahịa azụmaahịa afọ gị
Wednesday, December 9, 2009 Saturday, October 18, 2014 Douglas Karr
Ọ bụ na oge nke afọ ọzọ… mgbe ị ga-ewepụta oge n'akụkụ inyocha gị kwa afọ ahịa atụmatụ. Afọ na-esote nwere ike ịdị mkpa karịa afọ ọ bụla gara aga na ngwa ngwa nke usoro mgbasa ozi mmekọrịta. Nke a bụ ihe m na-akwado ịnakọta: Spzụ ahịa nke Medium - Nke a bụ ego akwụ ụgwọ n'ezie maka ahịa na mgbasa ozi na mpụga. Ighapu nke a n'ime uzo di nkpa. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, edepụtala naanị ‘ntanetị’ na ntanetị